ATR 72-500 nwa afọ FS2004 ke agba nke VARIG (Viação Aérea Rio-Grandense) Olympic Summer Games 2016. VARIG bụ onye Brazil ụgbọelu. na 3D nlereanya e kere site ISDT na 2D panel site Hanno Frings. Gụnyere zuru ezu 2D panel na photo-adị n'akụkụ echiche, omenala ụda na kpọmkwem gauges. Ọ dịghị virtual kokpiiti (VC).
Onye edemede: ISDT, panel nke Hanno Frings